Iindaba-Esona Siguquli siBalaseleyo
Emva kokushiya i-16 yokufaka i-insulated igcwele i-Slurpee kwisihlalo esiphambili se-sedan eshushu, siyaqiniseka ukuba i-Hydro Flask 22-ounce tumbler iyona nto ibalulekileyo kubantu abaninzi. Nokuba sihlupheka ngobushushu be-112-degree, silifumene ixabiso lokugquma phakathi kwezona zinto zininzi zisebenza kakuhle (bonke banokugcina isiselo sakho sishushu okanye sibanda iiyure ezimbalwa). Ukusebenza kwe-Hydro Flask kunye ne-aesthetics kuyenza iphumelele.
Esona sigwenxa sethu siyithandayo yi-Hydro Flask's 22-ounce. Ngokungafaniyo nebhotile yamanzi okanye i-thermos, i-tumbler ayikokuphosa engxoweni. Igcina bobabini ubushushu kunye nokubanda kuphela okoko ufuna ukusuka kwenye indawo uye kwenye kwaye ikuvumela ukuba usike ngokulula xa usendleleni: sesona sitya sokuhamba.
Iintlanzi ezintlanu zema ngaphandle ngexesha lokuvavanywa kokubanda kweSlurpee, kwaye iHydro Flask yayikweso sihlanu siphezulu. Kwaye kwathatha indawo yesibini kuvavanyo lwethu lokugcina ubushushu, lubekwa kwinqanaba elinye kubushushu, ke iya kuyigcina ngokulula ikofu yakho ishushu ngalo lonke ixesha lokuhamba kwakho. Kodwa i-aesthetics kutheni abantu beyithanda le nto. Sincokole nabantu abalishumi elinambini (okanye nangaphezulu) kwisidlo sangokuhlwa sijikeleze umlilo, kwaye bonke bavuma ukuba i-Hydro Flask kulula ukuyibamba kwaye iyathandeka kunayo nayiphi na eminye imizekelo eli-16 esiyijongileyo- kwaye oku kubaluleke kakhulu kubantu abazinikelayo. I-Hydro Flask inesimo esincinci, esona sinqwenelekayo sazo zonke izinto eziwayo esizijongileyo kwaye ziza kwiidyasi ezisibhozo zomgubo. Sikhetha ezo zetha kwithafa engenazintsimbi, kuba ezo zishushu ngokungathandabuzekiyo ngaphandle kwebala ukuba ziyekwe elangeni.
I-Hydro Flask ibonelela ngesiciko esine-straw edityanisiweyo ye-32-ounce kunye ne-22-ounce ye-tumbler. Sizamile kwinguqulelo enkulu, kwaye iyamangalisa: ikhuselekile, kulula ukuyisusa kwaye icoceke, kwaye ifakelwe isilum eguquguqukayo yomlomo ukukhusela ukuthambeka kwe-palate ethambileyo.
Okokugqibela, sathumela inkampani nge-imeyile ukubuza ukuba ingaba ikhuselekile na. Impendulo: “Nangona isitya sokuhlambela izitya singazukuchaphazela iplastikhi yokufaka ubushushu, amaqondo obushushu aphezulu kunye nezicoci zinokuyitshintsha ingubo yomgubo. Ngokufanayo, ukufunxa yonke iflask yakho emanzini ashushu kunokuyitshintsha umbala. ”